VIDEO DAAWO DEG DEG:Muuse Biixi oo sheegay in aysan diidaneen Soomaalinimo, isla markaana ay qayb ka yihiin Soomaaliweyn - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandVIDEO DAAWO DEG DEG:Muuse Biixi oo sheegay in aysan diidaneen Soomaalinimo, isla markaana ay qayb ka yihiin Soomaaliweyn
October 31, 2020 marqaan Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta Comments Off on VIDEO DAAWO DEG DEG:Muuse Biixi oo sheegay in aysan diidaneen Soomaalinimo, isla markaana ay qayb ka yihiin Soomaaliweyn
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo ka hadlayey munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshihiisa siyaasadeed ee la xiriira wadahadalka uu la yeelanayo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay inaysan diideyn Soomaalinimo, isla markaana ay qeyb ka yihiin Soomaaliweyn, laakiin ay ka soo horjeedaan xoog ku muquuninta siyaasadeed, marka ay timaado siyaasadda.
Muuse Biixi wuxuu intaas ku daray in wax kasta oo dhaca aysan meesha ka saareynin inuu yahay Soomaali, taasoo isku xirta dhammaan shanta gobol ee Soomaaliya, kala duwanaanshuhu waa wixii dhacay iyo sidii loo maareeyay.
“In la dhaho dadka Somaliland way ka soo horjeedaan Soomaalinimada waa been. Waxaan ku faaneynaa Soomaalinimada, waan ka dhalanay, lafaheena iyo dhiigayagu waa Soomaali, waxaana dooneynaa in Soomaalidu wax qabato oo ay horumar gaarto. Laakiin waxa xun ayaa ah in la yiraahdo waxaad tihiin laba gobol wax walbana waa inaad u hogaansantaa ”ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, wuxuu diidayaa hadalada siyaasadeed qaarkood, kuwaas oo uu ku tilmaamay hadalo sii kala fogeyn ah halkii xal laga raadin lahaa.
Hadalka madaxweynayaasha dhawaanahan wuxuu imaanayaa maalmo kadib markii dowladiisa ay hakisay wada shaqeyntii ay la laheyd dhamaan hay’adaha UN-ka sababo la xiriira heshiiskii dhawaan dhex maray UN-ka iyo dowlada federaalka ee Soomaaliya, kaas oo u weeciyay Somaliland inay yeelato dowlad goboleed halkii ay markaa ahayd maamul madax-bannaan.
Kenya oo Siweyn Looga Cambaarayey Islaam Nacaybka Dalka Faransiiska